भारतलाई बाबुरामको सुझाव : शक्तिशाली चीनसँग प्रतिस्पर्धा नगरेकै राम्रो – ZoomNP
भारतलाई बाबुरामको सुझाव : शक्तिशाली चीनसँग प्रतिस्पर्धा नगरेकै राम्रो प्रकाशित मिति: शुक्रवार, कार्तिक १९, २०७३ समय - ८:३१:३० काठमाडौं, १९ कात्तिक-पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले चीन र भारत दुवैले नेपाल मामिलामा आफूलाई प्रतिस्पर्धी भन्दा सहयात्रीका रुपमा उभ्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
इण्डिया फाउन्डेसन, नेपाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र सेन्टर फर कन्टेम्पोररी स्टडिजले संयुक्त रुपमा काठमाडौंमा गरेको ‘नेपाल र भारत : नयाँ आयामको खोजी’ बिषयक गोष्ठीमा बोल्दै डा. भट्टराईले नेपालको आर्थिक समृद्दिमा चीन र भारत दुबै छिमेकीको भूमिका रहेको उनले बताए । भट्टराईले चीनको नेपालमा मुख्य चासो तिब्बती मामिला रहेको बताए ।
‘नेपालको दुई तिहाई सम्पर्क र सम्बन्ध भारतसँग छ र त्यो अन्य कुनै पनि मुलुकसँग छैन् । यो धरातलीय यथार्थलाई बुझेर नेपालले आफ्ना नीति र व्यवहारहरु निर्देशित गर्न आवश्यक छ’ उनले भने । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले उक्त गोष्ठिको समापन बिहीबार साँझ गरे ।